Success & Motivation Quotes - အောင်မြင်မှု နှင့် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား သာဓကများ
မကြာခင်မြန်မာ့ဈေးကွက်စီးပွားရေး တိုးတက်လာမှုနဲ့အတူ HR, Admin, Finance, BDD, Sale & Marketing, R&D, IT, Engineering, Medical, Production, Trade, Logistic, Hotel & Tourism, Bank စတဲ့ မတူညီတဲ့ Sectors တွေမှာ လုပ်ငန်းအသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်၊ စိတ်ညစ်မှုအသစ် J တွေနဲ့ မလွှဲမသွေကြုံလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်ရဲ့စာစုတွေနဲ့ စိတ်ခွန်အားယူပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ လူကြီးမရှိ-လူလတ်၊ လူလတ်နေရာ-လူငယ်တွေက ပုခုံးပြောင်း လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ယူ လာရတော့မှာမို့ ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်လည်း ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားပေးထားပါတယ်။
To become Opportunity Knock, Build your Door First (အခွင့်အရေးဆိုတဲ့အရာက သင့်တံခါးကိုလာခေါက်နိုင်ဖို့ ဆိုရင် သင်မှာအခွင့်အရေးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ တံခါးကိုအရင်ဆောက်ထားမှဖြစ်လိမ့်မယ်)
The Harder you Work, The Luckier you get (သင်ဟာ အလုပ်တွေကို ပိုမိုကြိုးစားအားထုတ်နိုင်လေလေ၊ သင့်ရဲ့ကံကောင်းမှုတွေကို ပိုမိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်လေလေပါပဲ)
SUCCESS! Always do the Things what you Afraid to do (သင်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကို သင်အမြဲတမ်း လုပ်နိုင်ခြင်းရဲ့နောက်မှာ အဲ့ဒီအရာရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရလိုက်တာပါပဲ)
Negative Thinker see for Difficult, Positive Thinker see Opportunity in Difficult (အဆိုးမြင်တဲ့သူအတွက်တော့ ခက်ခဲမှုတွေကိုပဲမြင်စေနိုင်ပြီး၊ အကောင်းမြင်တွေးခေါ်သူအတွက်တော့ အခက်အခဲတွေထဲက အခွင့်အရေးကိုမြင်နိုင်ပါတယ်)
Bigger Challenge is Bigger Opportunity for Growth (ရင်ဆိုင်စိန်ခေါ်မှုများများယူနိုင်လေလေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတွေက များလာလေလေပါပဲ)
Success isaJourney notaDestination (အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရောက်ရှိသွားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး၊ လျှောက်လှမ်းနေခြင်းပါပဲ)
Do the Job you Love . . . Love the Job you Do (သင်ချစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ၊ သင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းချစ်ပါ)
Makeadifferent so that Success will find you (အများနဲ့မတူညီစွာကွဲပြားစွာဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါမှ အောင်မြင်မှုက သင့်ကို သိသိသာသာရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်)
Winner never Quitter . . . Quitter never Winner (အောင်မြင်သူဟာ ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတက်သလို၊ အရှုံးပေးတက်သူဟာလည်း ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူး)
Success consist two that is "Faithful" and "Patient" for your work (အောင်မြင်မှုဆိုရာမှာ အရာနှစ်ခုပါဝင်နေတယ်၊ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မှာ ယုံကြည်သစ္စာရှိမှုနဲ့ စိတ်ရှည်ဖို့ပါပဲ)
Success is mean that everything already preparation when the opportunities come out for you: အောင်မြင်မှုဆိုတာ သင့်အတွက်ပေးလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရယူနိုင်ဖို့ အရာအားလုံးကိုအဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှု တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရာ COCA ရှိဖို့လိုပါမယ်။ C=Capacity (လုပ်ဆောင်စွမ်းရည်)၊ O=Opprotunity (အခွင့်အလမ်း)၊ C=Commitment (သံဓိဌာန်)၊ A=Action (လက်တွေ့ကျလုပ်ဆောင်မှု) ဆိုတဲ့အရာ (၄)ခု အားလုံးရှိရပါလိမ့်မယ်။
အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်ခြင်းမှာ လူတိုင်းနီးပါး ကြုံဖူးတဲ့ Wrong-Decision (မှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်)၊ ပြီးရင် Experiences (အတွေ့အကြုံ) အဖြစ်ရလာပြီး၊ Right-Decision (မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်) တွေနဲ့အတူ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာဖြစ် လာခြင်းပါ။ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှာ Confident (ယုံကြည်မှုရှိခြင်း)၊ (Concentrate စိတ်ငြိမ်ခြင်း)၊ (Look-forward အနာဂတ်ကိုရှေ့ ရှုခြင်း)၊ (Observation စူးစမ်းလေ့လာခြင်း)၊ (Continuous စဉ်ဆက်မပြက်လုပ်ကိုင်ခြင်း) စတဲ့အချက်တွေရှိကြပါတယ်။ အဓိကအချက် ကတော့ (Positive-think Lead Positive Action အကောင်းမြင်တွေးခေါ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာခြင်းပါပဲ)။
(If You Don’t Like, Change It, . . . If You Can’t Change, Change Your Thinking . . .J) (အကြောင်းအရာတခုခုကို သင်မကြိုက် လျှင်ပြောင်းလိုက်ပါ၊ ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံလေးကို ပြောင်းကြည့်လိုက်ပါ)။(Change Your Thinking . . . Change Your Life) အောင်မြင်မှုသီအိုရီနဲ့ သင့်ရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီး - ဘ၀ကိုလည်း အောင်မြင်စွာဖန်တီးပြောင်းလဲနိုင်ပါစေ . . . J) ဆုတောင်းပေးရင်း စာပေဖတ်ရှုပေးသူအားလုံး အောင်မြင်သောဘ၀ပုံရိပ်တွေ ဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ မျှဝေရေးသားပေးလျှက်။ စွန့်ဦးတီထွင်မျိုးဆက်သစ်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့…